Qodobbada Chris Richardson ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Chris Richardson
Chris waa saxafi, tifaftire, iyo blogger. Wuxuu jecel yahay inuu qoro oo safro, isagoo raadinaya dhiirigelintiisa ku saabsan sameynta waxyaabo cusub, hal abuur leh.
15 Talooyin Ku Saabsan Suuq Geynta Si Aad U Wado Iibsi Badan
Talaado, July 31, 2018 Talaado, July 31, 2018 Chris Richardson
Suuqa maanta aadka loo tartamo, hal shay ayaa hubaal ah: isku daygaaga suuqgeynta qadka tooska ah waa inuu ku jiraa istaraatiijiyado suuq geyn moobiil, haddii kale wax badan ayaad ka maqnaan doontaa! Dad badan ayaa maanta la qabatimay taleefannadooda, badanaa sababta oo ah waxay caadaysteen kanaalladooda warbaahinta bulshada, awood u leh inay isla markiiba la xiriiraan dadka kale, iyo sidoo kale baahida loo qabo "joogso xawaare" waxyaabo muhiim ah ama aan muhiim ahayn . Sida Milly Marks, khabiir ku ah